Fepetra ara-pahasalamana Maro ireo efa tsy manao arotava intsony
Mitombo isa hatrany ireo olona tsy manao aron-tava intsony eny an-dalana eny.
Mivaha ny fanajana fepetra Ahiana hirongatra indray ny Covid 19
Olona iray tany amin’ny Faritra Menabe no lavon’ny Covid 19 ny 55 ny sitrana ny sabotsy teo, ary 36 ny tranga azo tamin’ny fitiliana 647 manome taham-pahavoazana 5,56%.
Ady amin’ny Coronavirus Tsy maharototra ny firy ny olona intsony
Mizotra any ammin` ny fifehezana ny valanaretina covid-19 isika araka ny nambaran` ny Praiminisitra Ntsay Christian ny alahady lasa teo.
Covid-19 nandritra ny 3 andro Ambony taham-pahafatesana
Niampy roa indray ireo olona lavon’ny Covid 19, ka ny iray teto Analamanga ary ny iray hafa tany Diana, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta.
Covid-19 Alaotra Mangoro Dimy no maty ny faran’ny herinandro teo
Razana miisa 2 no nivoaka tamin` ny hopitaly Ambatondrazaka vokatry ny valanaretina Covid 19 ny alahady lasa teo, hoy ny talem-paritra fahasalamana any Alaotra Mangoro.
Tontolon’ny zava-kanto Nalevina omaly ihany i Ramahafadrahona
Nodimandry teo amin’ny faha-82 taonany Rakotomahafadrahona Alphonse na Ramahafadrahona no ahalalan’ny maro azy teo amin’ny tontolon’ny zava-kanto.
Tafiakatra 148 ny maty hatramin’izay, ka ho an’ny tapa-bolana farany teo nisian’ny hamehana ara-pahasalamana faha-10, dia nahatratra 63 ny olona lavo. Tsy mijanona eto Antananarivo intsony, fa saika isan’andro no hisiana olona maty any amin’ny Farita hafa. Mitotaly 13 086 ny voa rehetra hatramin’izay. 214 ny olona vaovao voa ny sabotsy, ary 164 kosa omaly alahady. Ny 127 tamin’ireo omaly, dia Analamanga, 10 Mahajanga (06 Faritra Boeny, 03 Betsiboka, 01 tany Antsohihy Faritra SOFIA); 12 Antsiranana (12 Faritra DIANA:07 Ambilobe, 05 Antsiranana); 15 Toliara (02 Toliara, 01 Faritra Anosy, 12 Faritra Menabe). Miakatra hatrany ihany koa ny voa any amin’ny faritra. 48 498 ny fitiliana rehetra hatrizay, nahitana ireo tranga 13 086 ny voa 26,98% izay ambony tokoa. Manome 0,22% amin’ny vahoaka Malagasy 27 759 611 kosa ny tahan’ny fitiliana 48 498 vita hatrizay.
MAHERIN’NY 82% NY TAHAM-PAHASITRANANA
Ny 10 816 tamin’ny 13086 voa no efa sitrana, ka 212 ny vaovao omaly, ary 192 ny sabotsy teo. Mahatratra 82,65% ny taham-pahasitranana hatreto. 2122 na ny 16,21% tamin’ny voa mbola manaraka fitsaboana. Nisy fihenany 5 ny "forme grave" ka 90 izy ireo. Ny 70 ato amin’ny Faritra Analamanga, 06 Faritra Vakinankaratra, 10 Faritra Matsiatra Ambony, 04 Faritra Boeny .